Whatagraph: Google Analytics မှလှပသောရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးပါ။ Martech Zone
Whatagraph: Google Analytics မှလှပသောရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးပါ
စနေနေ့, ဧပြီ 2, 2016 Douglas Karr
ကြည့်ရအောင် Google Analytics ဟာပျမ်းမျှစီးပွားရေးအတွက်ရှုပ်ထွေးတယ်။ ပလက်ဖောင်းတွင်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးသောပညာရှင်များအတွက်၎င်းသည်အပြည့်အဝနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်သည် analytics ကျွန်ုပ်တို့သိကျွမ်းသောပလက်ဖောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မေးကောင်းမေးခဲ့သည့်မည်သည့်မေးခွန်းကိုမဆိုအဖြေရရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစစ်။ ကျဉ်းမြောင်းနိုင်သည်။ အေဂျင်စီတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှစီးပွားရေးမဟုတ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အချက်အလက်များကိုခွဲထုတ်ရန်ကိစ္စများပင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ - နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်သည်များပင် - အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းများနှင့်ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရသည် analytics ရလဒ်များကို အခြေခံ၍ သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းတို့သည်အဆင်ပြေသည့်နေရာအထိဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics သို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်အစီရင်ခံစာများပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် dashboard များတည်ဆောက်ခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားရိုးသားစွာတွန်းပို့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ရိုးရှင်းသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်သည့်အလိုအလျောက်စနစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှီခိုနေရသည်။
ဘာလဲ ဂူဂဲလ် Analytics ဒေတာကိုလှပတဲ့နေရာအဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ infographics ၎င်းသည် pagines များ ဖြစ်၍ browser မှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် PDF မှတစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်းတို့ဖြစ်သည် sign up လုပ်ပါ၊ သင်၏ Google Analytics အကောင့်ကိုထည့်ပါ၊ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။
output သည်တိုင်း၏အမြင်အာရုံရှုထောင့်နှင့်အတူအစာရှောင်သည် analytics အပါအဝင်မက်ထရစ်,
နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်သို့အစီရင်ခံစာများကိုယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
အသစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလာရောက်လည်ပတ်သူအချက်အလက်များအပါအဝင်နေ့အားဖြင့်စုစုပေါင်း or ည့်သည်အရေအတွက်
စုစုပေါင်းအစည်းအဝေးများ၊ ပျမ်းမျှ session အချိန်နှင့် bounce နှုန်းကို
စုစုပေါင်းစာမျက်နှာရှုထောင့်များ၊ ကဏ္ per တစ်ခုချင်းစီ၏စာမျက်နှာအမြင်များနှင့် browser မှပြုလုပ်သော session များ
မိုဘိုင်း, တက်ဘလက်နှင့် desktop အစည်းအဝေးများ
ရှာဖွေရေး၊ လူမှုရေး၊ တိုက်ရိုက်နှင့်အခြားထိပ်တန်းရင်းမြစ်များဖြင့်အသွားအလာရင်းမြစ်များပြိုပျက်သည်
Pro နှင့် Agency ၏ဗားရှင်းများမှာ -
အသွားအလာအမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်မှု၊ အသွားအလာကျဆင်းမှုအမြင့်ဆုံး၊ bounce rate အမြင့်ဆုံးနှင့်အများဆုံးတိုးတက်လာသော bounce rate ရှိသောလိုင်းများ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု infographic "အကျယ် =" 640 "အမြင့် =" 2364″ />
အကယ်၍ သင်သည်အေဂျင်စီတစ်ခုအနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားပါကသင်၏အဆင်းအရောင်နှင့်အမှတ်အသားတစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် output အစီရင်ခံစာများကိုပင်အမှတ်အသားပြုနိုင်သည်။
Whatagraph ကိုအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးရန်အတွက် sign up လုပ်ပြီး ၁၄ ရက်အကြာတွင်သင်ရွေးချယ်ထားသော version သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။
Whatagraph များအတွက် sign up ကို
ဤကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ချင်သောတစ်ခုတည်းသောတိုးမြှင့်မှုသည်အချက်အလက်အားလုံးကိုတင်ပို့ခြင်းထက်အပိုင်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ခြင်းစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ Google Analytics မှာကြီးမားတဲ့ပြproblemနာရှိနေတယ် ရည်ညွှန်း spam, ဒါကြောင့်အခြေခံနံပါတ်များကိုအသွားအလာသေးငယ်တဲ့ပမာဏနှင့်အတူဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အများကြီးကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
Tags: နှစ်ပတ်လည် analytics အစီရင်ခံစာများအလိုအလျောက်အစီရင်ခံစာများပျမ်းမျှ session အချိန်တုံမှုနှုန်းbrowser ဆွေးနွေးမှုများကူးပြောင်းနှုန်းနေ့စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများနေ့စဉ် visit ည့်သည်အရေအတွက်ထွက်ပေါက်အရေအတွက်google analytics အေဂျင်စီgoogle analytics လိုင်းများGoogle analytics ရည်မှန်းချက်များGoogle Analytics infographicစာမျက်နှာများကို trending google analyticsinfographicပြည်တွင်းရှာဖွေမှုများပြန်လာ visit ည့်ဒေတာနှိုင်းယှဉ်အသစ်စာမျက်နှာအမြင်များစုစုပေါင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစည်းအဝေးများစုစုပေါင်း visit ည့်သည်အရေအတွက်အသွားအလာရင်းမြစ်အပတ်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများ
Marketing Automation ဆိုတာဘာလဲ။ သင်သိထားရန်လိုအပ်သည်…
ဧပြီ 6, 2016 မှာ 10: 05 AM
ဥပမာအားဖြင့် 'PDF' သို့အစီရင်ခံစာကိုကူးယူသောအခါဂရပ်ဖစ်အချို့ပျောက်ဆုံးနေပြီး၎င်းသည်အချို့သောအချက်အလက်များကိုအသုံးမကျစေသည် rend
ဧပြီ 6, 2016 မှာ 11: 15 pm တွင်
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ် - Barry အဲဒီမှာငါဘာပြproblemsနာမှမရှိခဲ့ဘူး။ သူတို့ကတချို့ကျချိန်တွေရှိခဲ့ရင်လား။
ဧပြီ 7, 2016 မှာ 5: 38 AM
Barry, တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒေါက်ဂလပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ အခုတော့အားလုံးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နေပြီ။ သငျသညျအခြို့သောပြproblemsနာများရင်ဆိုင်နေရလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး လိုင်း drop!
ဧပြီ 13, 2016 မှာ 12: 18 pm တွင်
အမြင်အာရုံဖြင့်အလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သူတို့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသောကြောင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောအကူအညီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်